လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်: အမျိုးအစားများ, အကြောင်းတရားများ, ရောဂါလက္ခဏာများ, နှင့်ကုသမှု
အားဖြင့် Posted: Fisayo
သြဂုတ်လ 15, 2015
Enhancing stimulation by trying new routines and positions, using erotic materials such as videos, books, devices, စသည်တို့ကို. and self masturbation.
Encouraging non-coital behaviors such as oral sex, masturbation, စသည်တို့ကို.
မှတ်ချက်ပေးရန်ကိုပထမဦးဆုံးဖြစ် အပေါ် "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်: အမျိုးအစားများ, အကြောင်းတရားများ, ရောဂါလက္ခဏာများ, နှင့်ကုသမှု"
မှတ်ချက် Leave ပြန်ကြားချက် Cancel	သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာထုတ်ဝေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ.မှတ်ချက်နာမကို *
မတ်လ 19, 2016
10 ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က Round ခရီးသွားနိုင်ရန် Want အဘယ်သူသည်နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကိုအကြောင်းမူကားဂျော့ဘ်
ချိတ်ဆက်ထားပါ!	@askIroyin Follow